Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.5.2 leverage heterogeneity
Ozugbo ị kpaliri ọtụtụ ndị mmadụ ka ha rụọ ọrụ na nsogbu nke sayensị n'ezie, ị ga-achọpụta na ndị ị ga-eso ga-abụ ndị dịgasị iche iche n'ụzọ abụọ: ha ga-adịgasị iche na nkà ha na mgbalị ha. Mmeghachi omume mbụ nke ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ịlụso ọgụ a ọgụ site n'ịgbalị igbochi ndị na-abaghị uru ma na-agbali ịchọta ihe ọmụma zuru ezu site na onye ọ bụla fọdụrụ. Nke a bụ ụzọ na - ezighi ezi ịmepụta ọrụ mmemme. Kama ịlụso ọgụ dị iche iche ọgụ, ị kwesịrị ịkụnye ya.
Nke mbụ, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji wepụ ndị na-enweghị nkà. Na oku na-emeghe, ndị na-enweghị ihe ọmụma na-akpata enweghị nsogbu; onyinye ha adịghị ewute onye ọ bụla ma ha anaghị achọ oge ọ bụla iji nyocha. Na nyocha ụmụ mmadụ na kesaa ọrụ nchịkọta data, Ọzọkwa, ụdị kachasị mma na-abịa site na redundancy, ọ bụghị site na nnukwu ụlọ maka itinye aka. N'ezie, kama ịhapụ ndị na-enweghị nkà, ọ ka mma ka ha nyere ha aka inye onyinye dị mma, dịka ndị na-eme nnyocha na eBird mere.
Nke abụọ, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji nweta ihe ọmụma site na onye ọ bụla so na ya. Ikere òkè n'ọtụtụ ọrụ mmemme na-adabaghị (Sauermann and Franzoni 2015) , na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị mmadụ na-atụnye ụtụ-mgbe ụfọdụ a na-akpọ isi abụba - na ọtụtụ ndị na-atụnye obere-mgbe ụfọdụ a na-akpọ ọdụ ogologo . Ọ bụrụ na ịnweghị ịnakọta ozi site na isi abụba na ogologo ọdụ, ị na-ahapụ ọtụtụ ozi akọwaghị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na Wikipedia kwetara 10 na naanị 10 ndozi site na nchịkọta akụkọ, ọ ga-efunahụ pasent 95 nke ndozi (Salganik and Levy 2015) . Ya mere, ya na ndi oru mmekota oru, o kacha mma iji mee ka mmadu di elu karia ichu iwepu ya.